UMsomi waseKZN uzohola amaProteas
KUSUKELA kwesokunxele umqeqeshi wamaProteas uNorma Plummer, umengameli weNetball South Africa uCecilia Molokwane nesithenjwa somdlali uBongiwe MsomiIsithombe: SITHUNYELWE
ZWELAKHE NGCOBO | August 12, 2018
LIZOHOLWA uBongiwe Msomi ogijima kwiThunderbirds yase-Australia iqembu lamaProteas elizoyodlala kwiQuad Series nezingqongqwane kwinetball okuyiNew Zealand, Australia ne-England ngenyanga ezayo.
Ememezela isikwati ngemuva kokuziqeqesha ePitoli, umqeqeshi uNorma Plummer uthe kubagqeme ingozi engeqiwa ntwala ukungabikhona kwezethenjwa zabadlali bakhe abathathu.
Umngani kaMsomi, uPrecious Mthembu oyinsika yeKingdom Stars nokade ayibamba kumaProteas uzobe engekho ngenxa yokuthi akakalulami selokhu alimala kumaCommonwealth Games abeseGold Coast e-Australia nonyaka.
Omunye umdlali waKwaZulu-Natal oboshelwe kuleli qembu uJessica Khomo ogijima kwiKingdom Stars.
Abanye abadlali abazobe bengekho ngo- Izelle Griesel okulindeleke ukuthi ayohlinzwa eqakaleni nomakadebona * -Erin Burger onomkhuhlane ozomlalisa izinyanga izine.
“Lesi simo sivulele abanye abadlali ithuba lokukhombisa amakhono abo,” kusho uPlummer esitatimendeni esithunyelwe yiNetball South Africa.
“URome Dreyer ubelokhu engqongqoze njalo nosekuthele izithelo zokuthi athole leli thuba. Omunye umdlali engimbheke ngabomvu uKhanyisa Chawane noJessica Khomo,” kusho
Omunye umdlali oboshelwe esikwatini uMeagan Roux ozobe edlala okokuqala ngqa.
“Besekuyisikhathi ngimbuka,” kusho uPlummer.
“Ukwazi ukudlala nangasophondweni okuyinto enhle.”
Lo mqeqeshi uveze ukuthi isikwata sakhe sabadlali abangu-15 sizobhekisa amabombo eNew Zealand ngoSepthemba 8. Lona kuzobe kuwumlenze wokuqala weQuad Series okukhona kuwo i-Australia, New Zealand ne- England.
“Ngizoba nesonto lonke naso ngaphambi kokuqala komdlalo wokuqala. Siqoke abadlali abangu ukuvika ingozi,” kusho uPlummer othe ukunqoba kwe-England kumaCommonwealth Games kube yinto enhle.
Lo makadebona womqeqeshi udalule ukuthi isikwata esizoyoyibama kwiWorld Cup ezodlalelwa eLiverpool ngonyaka ozayo sizomenyelwa ngaphambi kokuphela konyaka.
Limi kanje selilonke iqembu:
Bongiwe Msomi, Karla Pretorius, Khanyisa Chawane, Rome Dreyer, Maryke Holtzhausen, Jessica Khomo, Danelle Lochner, Phumza Maweni, Lenize Potgieter, Shadine van der Merwe, Ine-Mari Venter, Zanele Vimbela
Amareserves: Sigrid Burger, Meagan Roux, Monique Reynecke